Petition · Afaan Oromoo For Federal government Official Language. · Change.org
Afaan Oromoo For Federal government Official Language.
Addisu Mamo started this petition to PM Dr Abiy Ahmed
Afaan oromoo afaan saba guddaa fi baha Afrikaa keessatti bal'inaan dubbatamuudha. Baay'ina uummata afaanicha dubbataniin Itiyoophiyaarraa sadarkaa dura irratti argama.Dhugaan jiru kana ta'us afaanicharratti hacuuccaan raawatemee fi raawwatamaa jiru cimaa dha.Biyya Itiyoophiya kana keessa taa'anii afaanicha dubbachuu miti akka waan afaan kun biyya kana keessa hin jirreetti warri waakkatanis baay'ee dha. Keessayyuu Naannoo Oromiyaa keessa jiraachaa warri yeroo afaan kana itti dubbattu sirumayyuu akka waan takka dhaga'anii hin beeknetti afaan maali dubbatta jedhanii nama gaafatanis hedduu dha. Kun immoo afaanicha dhaga'uu dhabanii osoo hin taane jibba afaanichaaf qaban irraa kan maddee dha.Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Federaalaa yoo ta'e, hacuuccaan irra ga'a ture sun guutummaatti irraa kaafama.Warri har'a dubbachuu salfatan sunis dubbachuuf kan isaan dursu hin jiru.